Sunday 3rd of July 2022 / 10:44:39 AM
काठमाडौं, १ असार । आजबाट लकडाउन खुकुलो भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन जारी भएको र केही खुकुलो मात्र भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
दैनिक जीविकोपार्जनमा चुनौती बढेपछि सरका
तीन चरणमा लकडाउन खोलिने निर्णय भ
अनलाइन दर्पण 2020-06-05
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर ६६ लाख ९२ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख २९ हजार ९९० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै एकैदिन अरू ५ हजार ४९९ जनाको मृत्यु हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ लाख ९२ हजार २८६ प
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले जारी लकडाउनलाई जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । शनिवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रपिरिषदको बैठकले लकडाउनको समय बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका र विमानस्थल अस
काठमाडौं, १७ जेठ । विश्वभर महामारीको रुपमा फेलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) काे जोखिम कम गर्न जारी लकडाउन सरकारले कम्तिमा जेठभर थप्ने संकेत गरिसकेको छ । जारी लकडाउन जेठ २० सम्म तोकिएपनि त्यसपछि लकडाउनको अर्को चरण शुरु हुने निश्चितप्रायः
काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले बुधबार दिउँसो सवा २ बजे नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको न
काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले देशलाई को
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा
काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपु
काठमाडौं, २ जेठ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले लकडाउन जेठ ५ गतेपछि पनि थप गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्रीकाअनुसार संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले लकडाउनलाई क
भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाएको क्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना [फोटो फिचर]
काठमाडौं , ३१ वैशाख । कालापानी क्षेत्रको सीमा सुरक्षााका लागि छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयानुसार व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने गरी बी
काठमाडौ - नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले आइतबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाउँदै छन्। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर भन्दा पनि भर्चुअल माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्र
फेरि रोयो रोल्पा, शवले रातभर कात्रो समेत पाएन !
रोल्पा । काठमाण्डौ ईट्टाभट्टामा मजदुरी गर्ने लालबहादुर खत्री १४ दिन क्वारेन्टाइन बसेर बिहिवार मात्रै घर आएका थिए। महिनौपछि घर आएका उनको छोराछोरीसंग सुकुनले रात बिताउने सपना बम बिस्फोटले एकैछिनमा सँधैका लागि चकनाचुर पारि दियोे ।
भक्तपुर, २० वैशाख । शुक्रबार दिउँसो करिब साढे एक बजे साइरन बजाउँदै ६ वटा एम्बुलेन्स भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित नेपाल-कोरिया मैत्री अस्पतालमा आए । पीपीई लगाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको दौडादौड चल्यो ।
पीपीई र मास्क लगाएका स्वास्थ्यक
थर्मल गनले सुलभलाई अदालत पुर्यायो, डेढ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको माग
अनलाइन दर्पण 2020-04-29
काठमाडौं, १७ बैशाख । कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुलभ अग्रवालविरुद्ध मंगलबार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवाललाई डेढ वर्ष कैद गरी १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै मुद्दा
बालुवाटारको सन्देश बोकेर कोटेश्वर पुगे प्रदीप ज्ञवाली, के दिए नेपालले जवाफ ?
काठमाडौं, १४ वैशाख । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै नेताहरुको कोठे बैठक र दौडधुप तीव्र बनेको छ ।
आइतबार दिनभरजसो नेताहरु गुटगत छलफल र भेलामा व्यस्त बने । बालुवाटारमा प्
अनलाइन दर्पण 2020-02-04
भाविन तुरकिया र उनका भाइले शून्यबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले अर्बौँ डलरमा परिणत भइसकेको छ । यसमा भाविनले आफ्नो सफलताको पूर्ण श्रेय पिताको एउटा सुझावलाई दिएका छन् र दाजुभाइ दुवैले बाल्यकालदेखि नै त्यही सन्देश शरण गर्दै आएको समेत उनले बताए । फोब्र्स
पृथ्वीमा साना ठूला गरि हालकाे अवस्थामा १९५ वटा देशहरु छन् । यसमध्ये १९३ देश संयुक्त राष्ट्र संघमा सदश्य रहेकाछन । दुइ देशहरू द हाेली सी र द स्टेट अफ प्यालेष्टाइन अवजर्भर राष्ट्र रहेकाछन ।
यीनै राष्ट्रहरू मध्ये कुनै अरबौंको जनसंख्या भएको
बल्ल बल्ल एउटा जागिर मिल्यो । काम गर्नुपर्ने बिजुली बजार एरिया । आफ्नो बसाई बालाजु वाईपास थियो । कोठाबाट अफिस आउन दुईवटा गाडी फेर्नुपर्ने । त्यसैले अनामनगर तिर कोठा पाए राम्रै हुन्थ्यो, गाडी भाडापनि बच्ने, समयको पनि बचत हुन्छ भन्ने सोचेर कोठा खोज्
काठमाडौं । आज असार १५ अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । कृषि प्रधान देश नेपालमा परम्परादेखि नै असार १५ गते आजकै दिन रोपाईं गरी दही चिउरा खानाले ‘गति परिने’ धार्मिक विश्वासअनुरूप आफ्नो खेतीपाती नहुनेहरू पनि अरूको खेतमा रोपाईं गरी हिलो छ्यापेर